एनईए सुदूर पश्चिमद्वारा स्व. इन्जिनियर जोशीका छोरालाई ५० हजार आर्थिक सहयोग
गृहपृष्ठ राष्ट्रिय एनईए सुदूर पश्चिमद्वारा स्व. इन्जिनियर जोशीका छोरालाई ५० हजार आर्थिक सहयोग
महेन्द्रनगर । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन ९एनईए० सुदूर पश्चिम कार्यकारणी समितिले काठमाडौं कलंकी बस्दै आएका दिवंगत ई। पुष्कर जोशीका छोरा प्रयान जोशीलाई ५० हजार रुपैँया सहयोग गरेको छ । बिहिबार एनईए सुदूरपश्चिम कार्यकारणी समितिले स्वर्गीय इन्जिनियर जोशीका आमालाई रकम हस्तान्तरण गरेको कोषाध्यक्ष ई. नविनराज जोशीले बताए । कञ्चनपुरको कृष्णपुर बस्दै आएका स्वर्गी ई. जोशीका आमालाई नाती प्रयानको पठनपाठनमा राहत मिलोस भन्दै उक्त रकम हस्तारण गरेको कोषाध्यक्ष ई. जोशीले बताए ।
बैतडी स्थायी घर भई काठमाडौं, कलंकीमा बस्दै गरेका इन्जिनियर दम्पती पुष्कर जोशी र अप्सरा श्रेष्ठको झण्डै दुई वर्ष अघि ग्यास गिजर पट्किदा अस्पतालमै उपचारार्थ मृत्यु भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा बालक प्रयान समेत घाइते भएका थिए ।
आमाबुवा गुमाएका बालक प्रयानलाई एनईए सुदूर पश्चिम कार्यकारणी समितिका सभापति ई। लव जोशी लगायतको समुहले गत वर्ष समेत ५१ हजार आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।
एनईए सुदूरपश्चिम कार्यकारणी समितिले ईन्जिनियरहरुलाई विभिन्न तालिमहरु पनि प्रदान गर्दै आएको छ । ‘स्मार्ट रोड’, ‘अर्थक्विक रेजिस्टेन्स’, नयाँ ईन्जिनियरहरुलाई ‘ओरिन्टेसन’ लगायतका तालिमहरु समेत प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालमा कोरोनाको महामारीका समयमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालहरुमा एनईए सुदूरपश्चिमले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री तथा ‘फुट अपरेटेड हेन्ड वास मेसिन’ अक्सिजन सिलिण्डर लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरेको थियो ।